Dowladda Soomaaliya oo ku baaqday Nabad lagu soo dabaalo qaranka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Soomaaliya oo ku baaqday Nabad lagu soo dabaalo qaranka
21st September 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho, 21, September, 2014…..Ra’iisul Wasaare-ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ahna Wasiirka Diinta iyo Awqaafta iyo Ku-simaha Ra’iisul Wasaaraha, Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa maanta shacabka Soomaaliyeed u diray farriin ku aaddan sannad-guurada 30-aad ee Maalinta Caalamiga ah ee Nabadda.
Ridwaan ayaa tilmaamayay in maalintan ay dadka Soomaaliyeed iyo dhammaan shucuubta adduunka xusuusinayso qiimaha ay leedahay nabadda iyo sida ay darruuri ugu tahay nolosha bani-aadanka iyo horumarka la hiigsanayo.
Munaasibaddan awgeed ayuu Ra’iisul Wasaare-ku-xigeenku dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay nabadda qaataan oo laga waantoobo dagaalada iyo rabshadaha sanooyinka badan ragaadiyey dalka hooyo, isagoo dalbaday in meel looga soo wada jeensado kuwa diidan nabadda, horumarka iyo dawladnimada ee bannaystay dhiigga dadka Soomaaliyeed.
Mudanaha ayaa caddeeyey in Xukuumadda uu gar-wadeenka ka yahay Ra’iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed ay dadaal kasta iyo qiima walba ku bixinayso sidii loo xaqiijin lahaa nabad dhammaystiran oo dalku gaaro, isagoo dadkiisana ku guubaabiyey inay qaatan kaalinta kaga aaddan halgankan si loo xaqiijiyo himilooyinka qaran ee ummadda Soomaaliyeed iyo waxa ay dadkeenu istaahilaan.
Mudane Ridwaan ayaa sheegay in Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobey uu sannadkii 1981-dii qaraar uu soo saaray oo tirsigiisu ahaa 36/67 loogu asteeyey maalintan nabadda adduunka, isla-markaana ay ka turjumeyso mabda’a ugu weyn ee loo asaasay hay’addaasi oo ah nabadda adduunka, iyadoo halkudhigga sannadkana uu yahay “Xaqa ay Dadku u leeyihiin Nabadda”.
Isagoo ka hadlayey Maalinta Caalamiga ah ee Nabadda, Mudane Ridwaan Xirsi waxa uu yiri: “Dadka Soomaaliyeed waxa ay soo mareen sanooyin fara badan oo ay ragaadiyeen colaado iyo dhibaaooyin ka dhashay, colaadaha Soomaaliya waxa ay dalkeenna iyo dadkeenna ugu kaceen qiimo naf iyo maalba leh. Soomaaliya iyo dadkeedu waxa ay ka soo daaleen dagaalada sokeeye, waxana maanta la joogaa xilligii la garawsan lahaa in aan qorigu shaqaynayn ee nabad iyo wadahadal xal lagu raadin lahaa.
“Qarankeenna waxa uu istaahilaa nabad, horumar iyo in uu la jaan-qaado adduunka horumarka samaynaya. Dadka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay fahmaan in nabaddu ay asaas u tahay horumarka uu aadanuhu sameeyo”. ayuu Ridwaan Xirsi.
“Waxaan maalintan ugu hanbalyeynayaa shacabka Soomaaliyeed ee nabadda jecel iyo dhammaan shucuubta adduunka iyo kuwa inaku garab taagan sidii aynu nabad ugu soo dabbaali lahayn qarankeenna” ayuu R/wasaare ku xigeen Ridwaan.
Xashiish lala yaabay oo ciidamada Australia ka qabteen xeebaha Soomaaliya
Nabad Sugidda oo sheegtay iney toogatay nin miino ku aasayey Suuqa Xoolaha